Sary mampihomehy - ampidino maimaim-poana ny sary mahatsikaiky
Sary misy fitenenana mahatsikaiky | humor
Teny mampihomehy amin'ny sary
Teny nindramina avy tamin'i Joachim Ringelnatz dia mivaky toy izao: “Ny hatsikana dia bokotra misakana ny vaky ny vozon'akanjoko.” Amin'ny vazivazy iray mahery dia azo atao foana ny mizotra amin'ny fiainana tsara sy amin'ny toe-javatra sarotra sasany miaraka amin'ny tsiky, na matetika kokoa miaraka amin'ny fihomehezana mahavariana hahafehy.
Sary mampihomehy sy teny mampihomehy mampihomehy anao
Voaporofo fa ny fihomehezana dia mahasalama ary mampiroborobo ny fisainana tsara. Na dia toa tsy misy zavatra ihomehezana aza izao, dia andramana.
Ny fanitarana ny zoron'ny vavanao sy ny fisarihana mankany ambony ary ny fitsikiana na ny fanokafana ny vavanao ary ny fanaovana feo mihomehy dia tena tsara ho an'ny fanahy.
Ny olona falifaly dia miseho ho tsara tarehy sy mendrika ho an'ny hafa. Voaporofo ihany koa fa na dia ny tsiky entin'ny artifisialy aza dia mitarika fahatsaram-panahy tsara kokoa. Zava-dehibe noho izany ny tsy hahavery ny fahatsapana vazivazy ary zatra ny fisainana miabo sy ny fihomehezana be dia be mba hanana fiainana tsara kokoa.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, mifalia amin'ny fitetezana ireo fanangonana sary maimaimpoana sy mahafinaritra. Ny tsindry eo amin'ny sary iray dia manokatra ny sary:
Ny pejinay vazivazy dia indray mipi-maso
Manana fanontaniana, sosokevitra na fanakianana ve ianao? Mitady sary avy amin'ny sarinao ve ianao? Aza misalasala mifandray aminay.
Vazivazy sary | humor
Dot to teboka sary ho an'ny ankizy
Sangisangy mpiara-miasa | humor
Sangisangy mpiara-miasa - hatsikana